Wiil Soomaaliyeed oo lagu Magacaabo Cumar Axmed oo ka mid noqday xiddigaha da’da yar ee qaranka dalka Sweden.
Ciyaaryahankan dada yar ayaa waxaa wax ka qoray jaraa id kasoo baxo magaalada Kristinastad oo magaciisa layiraa kristinastadblad.se, kaas oo u aqoonsaday inuu yahay ciyaaryanka bisha september ee sanadkan 2007.
Labo usbuuc ka hor ayuu wuxuu sameeyay ciyaartiisii ugu horaysay uu muujiyay wacdaro. Intaanan la gaarin xilligii kulaylaha ayaa Omar Ahmed oo 15 ah ka soo mid noqday dhalintii qaranka 15jir yaasha markii ugu horaysay, kuwaasoo laga qaatay 40 ciyaartooy. Laakiin markii la gaaray ciyaartii koowaad ee ay la lahaayeen dalka Norway kama uusan mid noqon xidigihii garoonka galabtaa, sugtayna jaaniskiisa goor ay noqotaba. Kadib markii ay ku guuldaraysteen labadii ciyaar ee ugu horaysay ee ee la yeesheen dalka Norway ayaa kabtankii kooxda Hans Lindbom bedelay qiyaas ahaan ciyaartooydii barkood si ay ula kulmaan tartankii ciyaaraha ay la lahaayeen finland dhamaadkii bishii lasoo dhaafay. Markaasoow weeraryahan cumar boos helay. ”Waa arin farxad oo xasuus gaara ii leh in la iigu yeero ciyaar qaran.” Sweden waxay ku guulaysatay 1-0 markaasoow cumar lagu bilaabay bankaha. Laakiin markii ciyaartii ka kala bar ay socotay ayaa lagu amray in uu soo galo. Maadaama ay cumar kooxdiisu 1-0 ku hogaaminayeen, ayay finland ciyaarta dardar xoogan ku waday. Cumar markiiba wuxuu bilaabay xoojinta difaaca kooxdiisa. Kadibse wuxuu bilaabay in uu ka mid noqdo seddaxda weraryahan ee afka hore ka ciyaara. Aad ayuuna ugu qanacsanaa dadaalkiisa ciyaareed maalintaa. ”si wanaagsan ayay iigu dhacday ciyaarta maanta” ayay jawaabtiisu ahay mar la waraystey.
Dà da: 15.
dhirir: 1.76 mitir.
culays: 62 kilo.
Kooxo: Näsby iyo Kristianstad FF.
Booska u ka ciyaaro: Weerar iyo dhexdaba
Maalintii labaad ee ciyaarta la isugu soo laabtay ayuu cumar ka mid noqday 11kii lagu bilaabay ciyaarta, isagoo la bedelay 50 daqiiqo kadib. Ciyaartu waxay ahayd mid furfuran kuna dhamaatay 3-3. Cumar wuxuu ku qanacsanyahay sida ay kooxda qaranku u ciyaato, taas oo shabahdo tan kooxdiisa KFF. Waxaan ku ciyaarnaa systemka 4-3-3 kaas oo ah ciyaar weerarku bedan yahay. Sedexdeena weerar yahan waxaanu nahay kuwo si sahlan u bedesho boosaska dhowr jeer inta ciyaartu socoto. Waxaanu baranaa sida ay wax walba u dhacayaa xilli kasta, leenahayna horjoogeyaal kala duwan oo qibrado fiican. Tababarahaygu wuxuu ii sheegay in aan muujiyay ciyaar wanaag si guuniyana ula socon doono xaaladayda ciyaareed, laakiin ma jirto wax hubaal ah booska ciyaaraha qaranka, waayo adigoo maanta kujiro ayaa beri lagaa waayn karaa, ayaa hadaladiisa ka mid ahaa.
← Mid ka mid ah, labadii Buundo ee isku xiraysey Gobolka Gedo iyo Gobollada kale ee Soomaaliya oo burburtay.
Khilaaf-Siyaasadeedka C/llahi Yusuf & Cali Geedi oo laga digay inuu Somalia u horseedo Dagaal hor leh. →